नेपाली जनताले पहिलोपल्ट टेलिफोन देख्न पाएको दिन अर्थात् ठिक १०० वर्ष अगाडिको जेठ १ गते ! « Swadesh Nepal
नेपाली जनताले पहिलोपल्ट टेलिफोन देख्न पाएको दिन अर्थात् ठिक १०० वर्ष अगाडिको जेठ १ गते !
नेपालमा सर्वसाधारण जनताले टेलिफोनको प्रयोग गर्न पाएको एक शताब्दी पूरा भइसकेको छ । सर्वप्रथम १९७० सालमा म्याग्नेटो प्रविधिबाट नेपालमा टेलिफोन सेवा शुरु भएको थियो । लगत्तै १९७१ मा काठमाडौं र रक्सौल (वीरगन्ज)बीच ओपन वायर लाइनको स्थापना भएर ट्रंक टेलिफोन सेवाको पनि शुरुवात भएको थियो ।
सर्वसाधारणले भने १९७४ जेठ १ गतेदेखि टेलिफोनको प्रयोग गर्न पाएका थिए । त्यसैले आज (जेठ १ गते)को दिनलाई नेपाली जनताले टेलिफोन सेवा प्रयोग गर्न पाएको दिनका रुपमा पनि लिइन्छ ।
१९९१ सालमा काठमाडौंमा टेलिफोन हेड अफिसको स्थापना भएपछि सार्वजनिक रुपमा टेलिफोनको प्रयोग विस्तार भएको थियो । खास गरेर १९९२ सालदेखि सार्वजनिक रुपमा टेलिफोन सेवा वितरण गर्न थालिएको हो ।
प्रारम्भमा काठमाडौं–रक्सौल (वीरगन्ज)बाट शुरु भएको ट्रंक टेलिफोन सेवा पछि अन्य ठाउँमा पनि विस्तार भयो । काठमाडांैदेखि थानकोट, चिसापानीगढी, भीमफेदी, हेटौंडा, अमलेखगन्ज हुँदै वीरगन्ज ट्रंक टेलिफोनको तार तानिएको थियो ।
१९९२ सालसम्म आइपुग्दा २५ लाइनको टेलिफोन एक्सचेन्ज शुरु भयो । १९९३ सालमा काठमाडौं–धनकुटा ट्रंक टेलिफोन लाइन शुरु भयो । पछि उक्त सेवा विराटनगरसम्म विस्तार भयो ।
त्यतिबेला खासगरी प्रशासनिक र व्यापारिक महत्वलाई ध्यान दिएर टेलिफोन सेवाको विस्तार भएको मानिन्छ । व्यापार र प्रशासनिक कामकाजका हिसावले बढी महत्व राख्ने क्षेत्रमा ट्रंक टेलिफोनको लाइन विस्तार हुन्थ्यो ।
१ शताब्दीको अवधिमा नेपालमा दूरसञ्चार (टेलिफोन सेवा)ले निकै फड्को मारिसकेको छ ।
अहिले सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमसँगै निजी क्षेत्रका थप ५ कम्पनीले दूरसञ्चार सेवा प्रदान गरिरहेका छन् ।